Vaovao farany Lingua volana Aogositra 2020 · Global Voices teny Malagasy
Navoaka ny Torolàlana amin'ny Fidirana amin'ny Tranonkala!
Voadika ny 22 Novambra 2020 5:38 GMT
Miarahaba ny rehetra! Atolotro anareo ny mikasika ny Lingua volana Aogositra 2020.
Tamin'ny fitambaran'io volana io, namoaka lahatsoratra 655 isika, nahasarika mpitsidika 274.101 ary jeripejy miisa 331.056. Nahatratra 256.963 ny mpankafy ny pejy Facebook iombonana Lingua, ary mpanjohy 260.376 tao amin'ny Twitter.
Namoaka ny lisitry ny torolàlana hanatsarana ny fidirana amin'ny tranonkalan'ny GV izahay, noho ny andiam-panontaniana avy amin'ny Lingua Frantsay.
Namoaka lahatsoratra momba ny fiantraikan'ny Covid19 amin'ny mpandika teny Lingua izahay .
Arabo ar 119.960
Espaniola es 19.440
Frantsay fr 16.995
Amharic am 8.822
Misaotra betsaka ry Lingua, noho ny fandraisana anjaranareo sy ny fotoana omenareo! Tohizo ny asa goavana!